उपराष्ट्रपति, सभामुख र गृहमन्त्रीका बहादुर छोरा – TajaNepal
Home /Blog/उपराष्ट्रपति, सभामुख र गृहमन्त्रीका बहादुर छोरा
समाचारOctober 9, 2018
उपराष्ट्रपति, सभामुख र गृहमन्त्रीका बहादुर छोरा
अब राष्ट्रपतिको सम्मान डिल्लीराज विष्टलाई !
काठमाडौँ । यो राज्यमा संवैधानिक पदका ठूलाबडाको निम्ति यही राज्यका विकृति र विसङ्गतिमा मलजल गर्ने गरी हुर्काइएका कङ्स पुत्रहरू प्यारा छन् । उपराष्ट्रपतिपुत्र विद्यार्थी नेता भनिन्थ्यो । यिनले सामाजिक अभियान चलाएको पनि सुनिएकै हो । तर अहिले यिनका पुत्र क्रसर उद्योगको व्यापारमा छन् । नेपालका क्रसर उद्योगहरू राजस्व नतिर्ने र जनतालाई सताउने गर्छन् । माओवादीको लक्ष्य, उद्देश्य र नीति यिनको संरक्षण गरी पैसा खाने हो ?
सभामुख कृष्णबहादुर महरा हिजो गृहमन्त्री थिए । उनका पुत्रको फूर्ति बाबुको हिजोको साख हो । महरा अर्थमन्त्री भए, त्यही बेलाको सुन तस्करीको रिपोर्टमा उनी छन् । अर्थ र गृहमन्त्री बन्दाको क्रेज संवैधानिक पदमा रहँदा उद्दण्ड पुत्रलाई फाइदा हुन्छ भने बाबुको के लाग्छ भनेर अहिले उम्कने ठाउँ छैन । उपराष्ट्रपति र सभामुखको नाम अपराध कर्ममा जोडिन्छ भने यो मुलुकको राज्य संरचना कहाँ राम्रो छ भन्ने हो ? कम्युनिस्टको बद्नाम यहीँ हुन्छ । प्रहरीको डीआईजी बढुवा, एसएसपी बढुवा, एसपी बढुवाको नाममा पैसा असुल्ने धन्दा यिनको छ । रसरङ्गमा रम्ने यिनीहरूले देश र जनता हेरेका छन् ? यिनले गाउँको हालत हेर्छन् ? रामबहादुर थापा गृहमन्त्री । यो मुलुकमा केपी ओलीले निर्दोष बालिका निर्मता पन्तको बलात्कार र हत्यामा सहभागी अपराधी प्रहरी एसपी डिल्लीराज विष्टलाई बचाउँदा गृहमन्त्रीले पद त्याग्छु भन्ने कि निर्मलाको हत्याकै बखत आवश्यक प्रमाण प्रहरीले लुकायो भनेर लाचारी प्रदर्शन गर्ने हो ? देखियो नि पदलम्पट चरित्र ! ओली सरकारको अस्तित्व गृहमन्त्री थापाले जोगाएको कुरा जनतालाई थाहा छ । सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन संवैधानिक पदमा छन् । यिनले भन्न किन सकेनन् निर्मलाले अन्याय भोग्नुहुँदैन । उनको हत्यामा सहभागी पत्ता लगाउन १२ वर्ष कुर्नु हुँदैन भनेर ? कतै यिनका उद्दण्ड पुत्रहरू यो काण्डमा सहभागी त छैनन् ?
कसका लागि यो देशको राजस्व प्रहरीको नाममा खर्च हुँदैछ ? कसका छैनन् छोरी ? नेपाल आमाका छोरीहरू सबै डिल्लीराज विष्ट, किरण विष्ट, आयुष विष्टको ओछ्यान हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ ? किन जोगिए बबिता बम र रोशनी बम ? किन लगियो निर्मलालाई बोलाएर बमको घरमा ? यसरी नै मार्ने बहादुर एसपी विष्टको योगदानको कदर गर्ने हो ? भीम रावलको सिफारिसमा अब अपराधी विष्टलाई राष्ट्रपतिले नै बलात्कार हत्या विभूषण दिलाउने सिफारिस गरे हुन्छ । नेपालमा जसले अपराध गर्छ, त्यसले राष्ट्रपतिबाट सम्मान पाउँछ । यो विगत हेरे भयो नि ! बलात्कारीलाई बचाउँदा डीआईजी भक्ति माझीले राष्ट्रपतिबाट यस पटक सम्मान पाए । कृष्ण सेनका हत्यारा एसएसपी विक्रम थापाले सम्मान पाएको विगत छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी थापना गरेको ढुङ्गाको अवतार हुन् भने यिनकै हातबाट निर्मला पन्तका हत्या र बलात्कारीले सम्मान पाउनुपर्छ, जहाँ भीम रावल र कर्ण थापा विजयी हुन्छन् । त्यसका लागि आईजीपी सर्वेन्द्र खनालले सिफारिस गरून् जनजाति सचिव प्रेम राईले टिप्पणी सदर गरून्, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्वीकृत गरून् । नेकपाका नेताको कुकर्मले देश तहस–नहस भएको कारण यस्तै घटनाले हो कुन्दन अर्यालजी ! प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू र आफ्नो गुटको लागि धन कमाएका छन् । देश लुटेका छन्, राष्ट्रघात गरेका छन् । पार्टीमा समान दर्जाका नेतालाई पेलेका छन् । भीम रावल र कर्ण थापाको दबाबमा निर्दोष चेलीको चीरहरण गर्ने अपराधी बचाएका छन् । यो केस त्यसै दब्छ ? हिजो माओवादीको नाममा डलर खेती गर्ने इन्सेक चुप बस्ला ? अरू मान्छन् ? हेगमा मुद्दा अब जान्छ, केपी गुटको फूर्ति देखिन्छ ।